Hooyo Soomaaliyada oo 6-Sanadood Debed-jiif ku ahayd London oo Geeriyootay | Qaran News
Hooyo Soomaaliyada oo 6-Sanadood Debed-jiif ku ahayd London oo Geeriyootay
Writen by Qaran News | 1:58 pm 5th Jan, 2022
Balse waxay ku gacan saydheen isku dayo badan oo ay golaha deegaanka ku damacsanaayeen in dib loo dajiyo, sida ay tabisay warbaahinta London Online News.
Xaawo Cabdi iyo wiilkeeda waxay hoy ka dhigteen kursi bannaan yaalla
Kamal Maxamuud oo ay ilmo adeer yihiin Muxyadiin ayaa yiri: “Waxay ahay qof naxariis iyo xannaaneyn badan. Waxay i geyn jirtay iskuulka marka dambeyna guriga ayay igu soo celin jirtay. Seygeeda waxa uu u geeriyooday kansarka sambabbada, wax badanna ma uusan joogin waddanka marka uu dhimanayay. Kaddib wax walba way ka go’een. Qoyska oo dhan ayaa isugu yimid iskuna dayay inay guri geeyaan balse waxay ku adkeysteen inaysan kursiga ka tagin.
“Labadooda ayaa iska warqabi jiray oo midba uu kan kale xannaaneyn jiray. Laakiin hadda Muxyadin kaligiis ayuu joogi doonaa halkaas. Waxaan rajeyneynaa in uu aqbali doono inay dadka xannaaneeyaan, mana ka quusan doonno inaan isku dayno sidii aan u caawin lahayn.”
Sawirro ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinta UK ayaa lagu arkayay wiilka ay hooyadiis geeriyootay oo isla kursigii goglanaya.
Maxaa u suurageluyay inay ku noolaadaan waddo London ku taalla? Wariye Cabdiqaadir Diinaari, oo in muddo ah u kuur galayay xaaladda hooyadan iyo wiilkeeda ayaa BBC-da u sharraxay sababta ay Xaawo Cabdi iyo wiilkeeda waqtiga dheer u daganaayeen kursiga kor yaalla maktabadda. “Waddanka UK maktabadaha kuraasta hor yaalla waxaa xeer u ah in aan laga hor qaadin, qof kasta oo isticmaalayana aan waxba la dhihi karin, xitaa haddii hoy ahaan loo isticmaalo. Waa kuraas loogu talogalay inay dadka isticmaalaan, maktabaddanina waa mid weyn. Marka taas ayaa u sahashay in hooyadan iyo wiilkeeda ay muddo dheer meeshaas ku noolaadaan,” ayuu yiri. Sababta ay dibad joogga u noqdeen ayuu sheegay inay salka ku heyso dhimashada seygeeda. “Waxaa igu maqaale ah in markii uu dhintay seygeeda ay aad uga naxday, dhaawac weynna uu u gaaray qalbi ahaan. Waxaa la sheegay in meydka odayga ay guriga ku hayeen labo maalmood .arkii dambena ay arkeen reer deris la ah. Kaddib waxaa laga saaray gurigii, waxaana loo sheegay in uusan ahayn mid u fiican labadooda maadaama uu weyn yahay,” ayuu yiri Diinaari. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray in Xaawo Cabdi dad badan xasuusan doonaan. “Waxay ahayd hooyo aad u wanaagsan oo qof walba uu jeclaa. Xitaa hadda aaskeeda waxaa mas’uuliyaddiisa qaaday oo qabriga u iibiyay wiil iyo gabar ay horay korintooda qayb uga soo qaadatay”. Dhawaan markii ay geeriyootay ayuu Cabdiqaadir u tagay Muxyadiin isagoo doonayay inuu ka wareyso qaabka ay hootadiis ku dhimatay balse wuxuu codsaday in aan su’aalahaas la weydiinin.
Celcelis ahaan da’da dadka dibad jiifka ah ee ku dhinta UK waa 44 dhanka ragga, halka dumarka ay ka yihiin 42, sida uu sheegay xafiiska Qaran ee Tirakoobka, oo magaciisa loo soo gaabiyo ONS.
Warbixin kasoo baxday ONS waxaa lagu sheegay in 597 ruux oo dibad jiif ah ay 2017-kii ku dhinteen England iyo Wales – kuwaasoo intooda badan waddooyinka ku geeriyooday, balse qaar ay ku dhinteen xarumo hoy ah iyo isbitaallo.
Hase yeeshee dhimashooyinkaas ayaa mar mar uun soo jiita indhaha warbaahinta, sida mar ay labo qof ku dhinteen sanadkii 2018-kii bannaanka hore ee baarlamaanka UK.